Momba anay - Xinjia Nylon Co., Ltd.
Huai'an Xinjia Nylon Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 1999. Talohan'ny 2009, dia Huai'an Xinjia Plastika Factory. Nantsoina tamin'ny anarany ankehitriny izy io tamin'ny volana febroary 2009. Ny orinasa dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana, fampandrosoana ary ny fivarotana kofehy nylon, tariby borosy indostrialy. Ny vokatra chip nylon 610, dia manana rafitra fitantanana kalitao feno sy siantifika.
Taorian'ny fandrosoana sy fanavaozana 20 taona mahery, Xinjia Nylon Co., Ltd. dia lasa orinasa mpamokatra kiran'ny nilona malaza any amin'ny faritanin'i Jiangsu. Ny fahamendrehantsika, ny tanjakay ary ny kalitaon'ny vokatra dia eken'ny indostria. Ny namana avy amin'ny saranga rehetra dia tongasoa hitsidika, hitarika ary hifampiraharaha amin'ny orinasa.
Huaian Xinjia Nylon Co., Ltd. dia manana velaran-tany 38 hektara ary namorona tobim-pamokarana kofehy kofehy nilona misy vokatra 4.100 taonina isan-taona, miaraka amin'ny velaran'ny fananganana 23.600 metatra toradroa ary fampiasam-bola mitentina 150 tapitrisa yuan. Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manana mpiasa 150, ka ny 15 amin'izy ireo dia mirotsaka amin'ny fikarohana sy fampandrosoana amin'ny haitao, ary manana fikarohana sy vokatra mahomby amin'ny fampandrosoana. Miisa 6 ny andalana famokarana ankehitriny.
Mandray anjara amin'ny tariby nylon 610 nylon izahay; PBT; maranitra maranitra; pp tariby akrilika; maranitra maranitra; zaitra ara-pitsaboana dia azo ampiasaina amin'ny famokarana milina, fiara, fiaramanidina, fanamboarana sambo, indostria simika. Manokana, dia afaka manao bearings, pads, famehezana fitaovana, lamba milina faritra, mpitari-dalana fitaovana, mitarika, volom-borona, borosy, borosy nify, wigs, sns. Ary afaka manamboatra vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa, ny haben'ny loko
Ny atrikasanay dia mandrakotra velarantany 10.100 metatra toradroa ary manana mpiasa 120, ao anatin'izany ny olona 15 mirotsaka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana teknika ary manana fahaiza-manao fampandrosoana matanjaka. Ny orinasa dia manome lanja lehibe ny fampandrosoana ny vokatra sy ny teknolojia vaovao, ary manome lanja lehibe ny fampiasam-bola amin'ny fikarohana siantifika. Izy io dia nangataka patanty modely famoronana sy fampiasana 9. Misy tsipika famokarana 6 amin'izao fotoana izao, ary misy extruders kambana marobe, milina famolavolana tsindrona, reactors polymerization ary fitaovana fitiliana mifandraika ampiasaina amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, izay afaka mamaly ny fepetra takian'ny fikarohana sy ny fampandrosoana pilot, mpanamory fiaramanidina ary famokarana indostrialy.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, nanitsy ny paikadiny fampandrosoana ny orinasa. Voalohany, nampifantoka ny loharanon'olombelona sy ny vola izy mba hampitombo ny hafainganan'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra manan-danja; faharoa, nandamina tamim-pitandremana ny famokarana vokatra novolavolain'ny tena izy mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra; fahatelo, nandinika ny fampandrosoana ny tsena izy ary mifantoka amin'ny tsena. Ny fampandrosoana haingana ny orinasa. Ny ekipa dia manana ekipa mpivarotra tena tsara misy mpampiasa 400 mahery manerana ny firenena. ny habetsaky ny landy ampiasaina dia ampitomboina manodidina ny 10% isan-taona, ary ny sutures ara-pitsaboana koa dia nitombo 5% isan-taona. Nametraka fototra mafy orina ho an'ny varotra vokatra.
Kalitao tsara:Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny famokarana vokatra novolavolain'ny tenany mba hiantohana ny kalitaon'ny vokatra
Ora nanomezana:Mpiasa efa za-draharaha sy antitra, azo antoka amin'ny fandefasana ara-potoana
Fomba feno:Mizara roa ho tariby borosy nify, tariby borosy indostrialy, tariby misy nylon, ny famaritana sy ny loko samihafa azo namboarina. Ny savaivon'ny tariby mahazatra dia 0.07M-1.8M, ary ny loko mena, mavo, manga, maitso, volomparasy, volondavenona, mainty ary mangarahara.